—— IINDABA ——
Zingaphi iindlela ezinokusetyenziselwa ukumakisha?
Abstract: Ububanzi bomgca woomatshini bokumakisha bohlobo lokutyhala ngesandla bumiselwe bububanzi be-hopper, edla ngokuba yi-100mm, 150mm, 200mm. Ukutyabeka okushushu kunyanzelekile ukuba kufudunyezwe phakathi kwe-180-230 degrees Celsius ukufaka isicelo. Indlela yokwakha yokumakisha inokwahlulahlulwa ngokwe-m ...
Zithini izibonelelo zejets zoxinzelelo oluphezulu lwamanzi ukususwa kokumakisha?
Okwangoku, xa ukumakishwa koxinzelelo oluphezulu koomatshini bokucoca amanzi kucociwe, ngenxa yokuba eminye imisebenzi ikwanazo neemfuno zokukhusela indalo ephezulu, uxinzelelo oluphezulu lwejet yokususa amanzi iye yavela ngalo mzuzu wembali, kwaye yaba luhlobo lokumakisha ukuba ...
Bahlelwa njani oomatshini bokumakisha ezindleleni?
Umatshini wokumakisha wendlela yamaqela amabini: Ukumakishwa kwamacandelo amabini kukumakisha okuphezulu okuphuhliswe kule minyaka idlulileyo. Kwahlukile kukumakisha okushushu-ukunyibilika kunye nokumakisha okuqhelekileyo kweqondo lobushushu ngenxa yokwehla kweqondo lobushushu okanye isinyibilikisi (esekwe emanzini) volatilization kunye nezinye iindlela zokomisa ngokwasemzimbeni zokwenza ifilimu yokutyabeka ....
Zeziphi ezona mpawu zibalulekileyo kwimveliso yokumakisha?
Iimpawu zemveliso yomatshini wokumakisha: Ukusebenza okuphezulu kunye nokuhamba okukhulu kwe-S7000 kunokuqhagamshela ngokuthe ngqo imipu emibini ukuze isebenze ngaxeshanye, nto leyo ephucula kakhulu ukusebenza ngokukuko kunye nokuxhasa ukusetyenziswa kwemilomo emikhulu yesayizi. Amandla: Ixabiso lokuhamba kwe-5.8 l / min lenza ukuba i-SF7000 ifanele ukuba ...
Zeziphi izixhobo ezinokusetyenziselwa ukuhlamba kakhulu ukucoca umgca wokumakisha?
Ukucocwa kokumakishwa kwesixhobo sokumakisha sokuhamba ngepavumente akupheleli nje ekunciphiseni uxinzelelo lwamanzi ngokubanzi, kuba ijethi yamanzi inefuthe elinamandla kakhulu kunye namandla okusika, kuye kwavela ibhanti ebanzi yokucoca. Ukwakhiwa okuluhlaza kufanelekile. Yonke indlela yendlela iya kucoca ngoku ...
Yintoni ekufuneka uyiqwalasele xa ucoca ukumakisha kwendlela
Ukucoca uphawu kunokuthintela ukubhabha ngoomatshini. Eyona nto inzima ngcono, ulwakhiwo kumbuso omncinci wokubetha, indlela eqhubela phambili yokuhamba ngokwakho kumgaqo wokuhamba ngesamente, ibhulorho yendlela enkulu, ibhulorho yokugxadaza, umatshini wokugaya ugandaganda ekucocweni kwemigca yokumakisha, ukugaya ububanzi ...
Zeziphi izinto ezisetyenziselwa ukumakisha ukususwa?
Umatshini ophawulweyo wokususa umgca wokucoca ulwelo unyusa ukuxhathisa nge-20 ~ 35% xa kuthelekiswa nezinto zokucoca ulwelo magnetite. Ungabhekisa kumava aphumeleleyo ebaleni, kubandakanya nophando kunye nokukhuthaza isihluzi sesithathu sokucoca imithombo yeendaba, ibhedi yokuhluza ye ...
Uwuguqula njani umatshini wokumakisha emva kwempazamo?
Umatshini wokumakisha uqala ngokufaka into yokususa ipeyinti ye-thixotropic kwindlela yokumakisha emayisuswe ukuze idibane ngokupheleleyo nepeyinti yendlela eza kususwa. Ngaphantsi kwesenzo sokususa ipeyinti, ipeyinti yendlela iya kungena, idumbe, kwaye idumbe kwimizuzu emi-2-10. Utshintsho lomzimba kunye neekhemikhali ezinje ...
Yintoni ifuthe lebhokisi yomgaqo kaloliwe okhawulezayo wesantya sohlobo lokuqala lokutyhala ngohlobo lwesisel?
Umphezulu womqadi webhokisi yomgaqo kaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu (umqadi owenziwe kwangaphambili) wesandla sokususa umatshini wokucheba iinwele ucocekile ngonyango olungangeni manzi. Ikhonkrithi ekhonkrithi kwicala lebhulorho, isiphelo sebhulorho, icala lomqadi, isiphelo somqadi. Susa iingubo zomhlaba, iipeyinti, kunye neendlela ezahlukeneyo zendlela ...